चुनावी प्रचार कस्तो छ ?
एकदम राम्रो छ । हामीले अहिले सम्म यस क्षेत्रका सबै गाउँपालिकाका वडाहरुमा घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यौ । र, अहिले हामी विभिन्न सभा, समारोहमा केन्द्रित भइरहेका छौ ।
मतदाताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ?
नुवाकोटबासी जनताको एउटै चाहना छ । लोकतन्त्रको रक्षा र नुवाकोटको विकासका लागि कांग्रेसले नै चुनाव जित्नुपर्छ । विगतमा कम्युनिष्टहरुको रमिता हेरिहो अव यस क्षेत्रको विकासका लागि कांग्रेसले नै चुनाव जित्नुपर्छ । हामी कांग्रेसलाई नै मतदान छौ भन्ने बाचा आममतदाताहरुले हामीलाई दिएका छन् ।
यस क्षेत्रमा तपाईको प्रतिस्पर्धा को सँग रहन्छ ?
मेरो प्रतिस्पर्धी बामको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका एमाओवादीका हिरानाथ खतिवडा हुन । जसको विगत नुवाकोटबासीलाई राम्रोसँग थाहा छ । विगतमा विभिन्न खालका आतंक मच्चाएर यस क्षेत्रका मानिसको उनले निर्मम हत्या गरेका छन् । स्वयंम एमालेका साथीहरु पनि उनले विगतमा दिएको पिडा सम्झेर उनलाई मतदान गर्ने पक्षमा छैनन् । त्यसकारण मलाई विश्वास छ म चुनाव जित्छु । धेरै फराकिलो मतान्तरले मैले चुनाव जित्दैछु ।
जित्छु त भन्नुभयो, आधार के हो ?
उनको विगतका बारेमा मैले अघि भनिहाले । तर लोकतन्त्रको रक्षा र नुवाकोटको समग्र विकासका लागि यहाँका जनताले मलाई मतदान गर्छन । नुवाकोटमा २०६४ साल यता के कति विकास भए भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा अहिले जति पनि कामहरु भएका छन् २०५२ सालमा अर्जुननरसिंह केसीले चुनाव जितेपछि सुरु गरेका कामले मात्र निरन्तरता पाएका हुन । विगतमा बाम भनाउदाहरुलाई यहाँका जनताले परिक्षण गरिसके । यस क्षेत्रको विकासका लागि कांग्रेसले नै जित्नुपर्छ भन्ने जनताको चाहना रहेको छ । र, मैले घरदैलो अभियानका क्रममा आम मतदाताको समस्या, गुनासाहरु सुनिसके निर्वाचन जितेपछि जनताकै हकहित र विकासमा काम गर्ने योजना बनाएको छु । मतदाताले पनि जिताउछौ ढुक्क हुनुस् भनेका छन् ।